तपाईको ( सोमबार, माघ १० को राशीफल ) -
२०७८, १० माघ सोमबार ०१:०३ January 24, 2022 clickonLeaveaComment on तपाईको ( सोमबार, माघ १० को राशीफल )
आफैलाई आशावादी हुन उत्प्रेरित गर्नुहोस्। यसले विश्वास र नम्रता बढ्छ तर त्यही समयमा डर, घृणा, डाह, बदला जस्ता नकारात्मक भावना छोड्न पनि तयार हुनुहोस्। अचानक धनको लाभ हुनाले तपाईंको बिल र तत्काल खर्च पूरा गर्नेछ। बन्धन र जोडिनुसँग सम्बन्धको नवीकरणको लागि सही दिन। आज कोही तपाईंको प्रेम बीच आउन सक्छ। तपाईंले आफ्ना परिवारका सदस्यहरुसँग कठिन समयको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ, तर दिनको अन्तमा तपाईंको जोडीले तपाईंलाई माया दिनेछन्।
हृदयरोगीहरूलाई कफी छोड्ने सही समय हो। कुनै पनि बढी प्रयोगले तपाईँको हृदयमा अनावश्यक दबाब पार्नेछ। आफ्नो जीवनमा एउटा उदात्त तालको फेशन बनाउनुहोस् र आत्मसमर्पणको मोल बुझेर हृदयमा प्रेम र कृतज्ञता राखेर सीधा हिंड्ने कला सिक्नुहोस्। यसले तपाईंको पारिवारिक जीवन अर्थपूर्ण बनाउनेछ। आज तपाईंलाई जीवनमा साँचो प्रेमको सम्झना आउँछ. चिन्ता नगर्नुहोस्, समय अनुसार सबै कुरामा परिवर्तन आउँछ, तपाईंको रोमान्टिक जीवन पनि त्यस्तै हो। तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीलाई नभएर अन्य कसैलाई आफ्नो नियन्त्रण गर्ने मौका दिनुभयो भने, तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीको प्रतिकूल प्रतिक्रिया पाउन सक्नु हुनेछ।
तपाईं दीर्घ रोगबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। नयाँ अनुबंधहरू आकर्षक लाग्न सक्छन्, तर चाहेको लाभ दिन सक्दैनन् – पैसा लगानीको विषयमा हतार गरेर निर्णय नलिनुहोस्। दिनको उत्तरार्द्धमा तपाईं आराम गर्न र आफ्ना परिवारका सदस्यहरूसँग समय बिताउन चाहनुहुन्छ। आज तपाईंलाई प्रेमको वरदान प्राप्त हुने देखिन्छ। यो तपाईंका सम्पूर्ण वैवाहिक जीवनको न्यानो दिन रहेको छ।
तपाईंको प्यारो सपना साकार हुनेछ। तर आफ्नो उत्तेजनालाई नियन्त्रणमा राख्नुहोस् किनकि धेरै आनन्दले केही समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ। गलत समयमा गलत कुरा नभन्ने प्रयास गर्नुहोस् – तर तपाईंका प्यारा मान्छेहरूलाई चोट पुग्ने ध्यान गर्नुहोस्। आज, तपाईंले आफ्नी प्रियतमाले तपाईंलाई कति प्रेम गर्छिन भन्ने महसुस गर्नुहुनेछ। आज तपाईंको मनमा आएका नयाँ पैसा बनाउने विचारको फाइदा लिनुहोस्। आफ्नो बाटोमा आएका सबैलाई विनम्र र आकर्षक भइदिनुहोस् – केही चुनिन्दाहरूले मात्र तपाईंको जादूले भरिएको आकर्षणको रहस्य थाहा पाउनेछन्। विवाह दैवले मिलाउँछ; आफ्नो जोडीले आज तपाईंलाई यो साबित गर्नेछन्।
तपाईंको मनले राम्रा कुराहरू सुन्नेछ। आज सामाजिक कार्यहरुमा उपस्थित हुने मौका पाउन सक्नुहुन्छ- जसले गर्दा तपाईं प्रभावशाली मान्छेको सम्पर्कमा आउन सक्नुहुनेछ। तपाईंले भिन्नै प्रकारको रोमान्स अनुभव गर्न सक्नु हुनेछ। साहसपूर्ण कदम र निर्णयले अनुकूल परिणाम ल्याउनेछ। कुनै पनि विषयलाई लिएर आफ्नो जोडीलाई धक्का नदिनुहोस्; यसले मात्र तपाईं दुवैको हृदयलाई टाढा गर्नेछ।
एउटा लाभदायी दिन हो र तपाईं दीर्घ रोगबाट राहत पाउन सक्षम हुन सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर प्रमुख वित्तीय सम्झौतामा बातचीत गर्दा, हतारमा निर्णय नलिनुहोस्। यदि सञ्चार र छलफलहरू राम्रो तरीकाले भएनन् भने – तपाईंले रीस उठेर पछि पछुताउनु पर्ने कुरा बोल्न सक्नुहुन्छ – केही बोल्नु अघि राम्ररी सोच्नुहोस्। तपाईंको जीवन खुशी दिनाले र विगतका गल्तीका लागि क्षमा गर्नाले योग्य बनिदै जान्छ। आज, तपाईंलाई आफ्नो मालिक सधैं तपाईंसँग किन यति अशिष्ट छ भन्ने सत्य थाहा हुनेछ। यसले तपाईंलाई साँच्चै नै राम्रो लाग्नेछ। तपाईंले उच्च पदका मान्छेसँग बाहिर गएर निवेदन गर्नु आवश्यक छ। कसैले वैवाहिक जीवन झगडा र यौन हो भनेर सोच्ने गर्छन्, तर आज सबै निर्मल हुनेछ।
तपाईंले आराम गर्न सक्ने दिन हो। तपाईंका मांसपेशीलाई राहत दिन तेलले आफ्नो शरीरको मालिश गर्नुहोस्। आज तपाईंमा आफ्ना परिवारका सदस्यहरू र साथै साथीहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्नाले नयाँ उत्साह र आत्मविश्वास जाग्नेछ। तपाईंले वास्तविकताहरुसँग सामना गर्नाले प्रियलाई बिर्सिनु पर्नेछ। नयाँ परियोजना र खर्चमा रूचि नलिनुहोस्। टाढाको यात्रा आरामदायक हुनेछैन – तर महत्त्वपूर्ण सम्पर्क बनाउन मद्दत गर्नेछ। तपाईंले आफ्ना परिवारका सदस्यहरुसँग कठिन समयको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ, तर दिनको अन्तमा तपाईंको जोडीले तपाईंलाई माया दिनेछन्।
तपाईंको बलियो लचक र निर्भयताले मानसिक संकायको शक्ति धेरै बढाउनेछ। यो गतिलाई चलाई राख्नुहोस् जसले गर्दा कुनै पनि अवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न तपाईंलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ। अचल सम्पत्तिमा लगानी गरे राम्रो हुनेछ। साथीहरूसँग बिताइने साँझ सुखद हुनेछ। तपाईंले आफ्नी प्रियतमालाई भेटेपछि रोमान्सले तपाईंको मन ढाक्नेछ। नयाँ कुरा सिक्ने तपाईंको प्रतिभा उल्लेखनीय हुनेछ। आज तपाईंलाई धेरै रोचक निमन्त्रणाहरू आउनेछन् – साथै एउटा आश्चर्यजनक उपहार पनि पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईंको जोडीले आज तपाईंको बारेमा सबै राम्रो कुरा गरेर प्रशंसा गर्नेछिन् र तपाईंको लागि समर्पण गर्नेछिन।
जीवन रमाइलो पार्न आफ्नो आकांक्षाहरूको जाँच गर्नुहोस्। योगको मदत लिनुहोस् – जसले तपाईंलाई आफ्नो स्वभाव सुधार गर्न शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक तवरमा स्वस्थ भएर बाँच्ने कला सिकाउँछ। तपाईंले बचत निवेशमा आफ्नो बचत राख्नुभयो भने तपाईंलाई राम्र फाइदा हुनेछ। एउटा पुरानो मित्रले दिनको पछिल्लो भागमा रमाइलो भेट गर्नेछ। रोमान्सले तपाईंको हृदय ढाक्नेछ। रचनात्मक प्रकृतिकका कार्यहरूमा संलग्न हुनुहोस्। तपाईंले आफ्नो सम्पत्तिमा लापरवाह गर्नुभयो भने हानि वा चोरी हुन सक्छ। के तपाईंलाई वैवाहिक जीवन समझौता मात्रै हो भन्ने लाग्छ? यदि हो भने, तपाईंलाई आज थाहा लाग्नेछ कि यस्तो राम्रो कुरा कहिल्यै तपाईंको जीवनमा भएको थिएन।
आफ्नो विचार व्यक्त गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। विश्वासको कमी हुन नदिनुहोस् किनकि यसले मात्रै तपाईंको समस्या जटिल हुनेछ र आफ्नो प्रगतिमा बाधा आउन सक्छ। आफैमा विश्वास गरेर पुनः आफ्नो मुस्कान पुन प्राप्त गर्ने र समस्या सल्टाउने प्रयास गर्नुहोस्। कुनै पनि लामो अवधिको निवेश नगर्नुहोस् र आफ्ना असल मित्रसँग बाहिर गएर केही सुखद समय बिताउने प्रयास गर्नुहोस्। कार्यालयको काममा धेरै संलग्न भएकोले आफ्नो जोडी/पत्नीसँगको सम्बन्ध तनाउपूर्ण हुनेछ। व्यक्तिगत सम्बन्ध संवेदनशील र कमजोर छन्। आज आफन्तहरूले तपाईंको वैवाहिक परमआनन्दमा केही हानि पुर्याउन सक्छन्।
बच्चाहरुले तपाईंको साँझ रमाइलो पार्नेछन्। नीरस र व्यस्त दिनलाई बिदा गर्न एउटा राम्रो खाने योजना गर्नुहोस्। उनीहरूको भेलाले तपाईंको शरीरलाई पुन ऊर्जा दिनेछ। एउटा नयाँ आर्थिक सम्झौता तय हुनेछ र नयाँ पैसा प्राप्त हुनेछ। अरूलाई आफ्नो केही समय दिने राम्रो दिन। आज तपाईंको प्रियलाई तपाईंको असह्य व्यवहारसँग सामना गर्न अत्यन्तै गाह्रो पर्नेछ। काममा व्यावसायिक रवैयाले प्रशंसा प्राप्त हुनेछ। एउटा विनोदी छलफलमा पुरानो मुद्दा उठ्न सक्छ र यसले तपाईं दुई बीच तर्क उत्पन्न गर्दछ।
स्वास्थ्यलाई निश्चित नै हेरविचारको आवश्यकता पर्छ। सुखद र सुन्दर साँझको लागि तपाईंको घरमा अतिथिहरूको भीड लाग्नेछ। प्रियको बिना तपाईंको समय बित्न गाह्रो पर्नेछ। तपाईंको विश्वास बढ्दैछ र उन्नति स्पष्ट छ। आफ्नो जोडीको जरुरी कामले गर्दा तपाईंको दिनको योजना बिग्रिन सक्छ, तर अन्तमा तपाईंले यो राम्रोको लागि भएको हो भन्ने महसुस गर्नु हुनेछ।